Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Hilton mepere ụlọ oriri na ọṅụṅụ kachasị na Asia Pacific
Hilton, otu n'ime ụlọ ọrụ ile ọbịa na-eto ngwa ngwa n'ụwa, ka atọrọ ịmalite ụlọ oriri na ọṅụṅụ kasị ukwuu na Asia Pacific na mmeghe nke ọnụ ụlọ 1,080. Hilton Singapore Orchard na Jenụwarị 2022.
Ugbu a emepere maka ndoputa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ ga-amalite mpụta mbụ n'ime obi nke Singapore's ogbe ndịda Orchard Road ma na-anọchi anya ọnụnọ flagship Hilton na obodo ahụ na-esote mmezigharị buru ibu. Ntughari sitere na Mandarin Orchard Singapore ugbu a, Hilton Singapore Orchard bụ nke OUE Limited ma Hilton ga-ejikwa ya.
Paul Hutton, osote onye isi oche, arụmọrụ, South East Asia, Hilton kwuru,"Dịka isi obodo na ebe isi obodo maka azụmahịa na ndị njem ntụrụndụ, anyị nwere nchekwube maka uto nke ụlọ ọbịa nke Singapore ka mgbake na-amalite na njem na-amalite n'ime ogologo oge. Anyị nwere obi ụtọ ịmalite afọ ọhụrụ site na mmalite nke mgbakwunye dị ịrịba ama na Pọtụfoliyo mpaghara anyị site na mmeghe nke Hilton Singapore Orchard, nke ga-anọchi anya ezigbo ụlọ oriri na ọṅụṅụ Hilton dị n'otu obodo dị mkpa maka South East Asia, ma na-atụ anya. ka anyị na-aga n'ihu na-ebugara onye ọ bụla na-agafe n'ọnụ ụzọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ anyị ọkwa Hilton a ma ama."
Site n'okike nke ọnọdụ ya na nnukwu akụrụngwa na ihe eji enyere ndụ aka, Hilton Singapore Orchard ọhụrụ bụ ebe zuru oke maka azụmaahịa na ntụrụndụ. Naanị ihe dị ka nkeji iri na ise si n'ọdụ ụgbọ elu Singapore Changi, ndị njem nwere ike ịtụ anya ọnụnọ imikpu n'otu n'ime ebe a na-achọsi ike n'obodo ahụ ma nwee ọ enjoyụ ịnweta tapestry nke ahụmịhe pụrụ iche sitere na ngwakọta eclectic nke nri mba ụwa, ejiji na imewe na ọtụtụ nso. nke nnukwu ụlọ ahịa. Ndị ọbịa na-eme njem maka ebumnuche ahụike ga-enwekwa ekele maka ịdị nso na ụlọ ọrụ ahụike ọkachamara mbụ dị n'ọnụ ụzọ ha.
Ebe obibi ọgbara ọhụrụ
N'iji ọnụ ụlọ 1,080 emezigharịrị na ọnụ ụlọ n'ofe ụlọ elu abụọ, Hilton Singapore Orchard ga-abụ otu n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ kachasị na Singapore. Ndị ọbịa ga-enwe ohere ịnweta ụdị ọnụ ụlọ na ọnụ ụlọ dị iche iche, ebe ndị ha na ezinụlọ na ndị ha hụrụ n'anya na-eme njem nwere ike ịhọrọ idebe ọnụ ụlọ njikọ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke enwere ike ịkwado ozugbo n'oge ndoputa. Ụlọ nkwari akụ ahụ dị mma maka ịkwado akụkụ njem dị iche iche, site na ntụrụndụ ruo ndị njem azụmahịa na ụlọ ọrụ na nnukwu ìgwè.
OKWU MMADỤ NA ỌRỤ
Ndị ọbịa ga-anụ ụtọ ihe eji enyere ndụ aka na ọrụ dị iche iche n'ime ụlọ nkwari akụ ahụ gụnyere ụlọ mgbatị ahụ zuru oke nke awa 24, ọdọ mmiri dị n'èzí, ebe ezumike nke Executive guzobere ọhụrụ yana njikọ kpọmkwem na ụlọ ahịa ọmarịcha ụlọ okpukpu anọ nwere ọtụtụ mpaghara na mba ụwa. ụdị ejiji na cafes mbinye aka na ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Ahụmahụ nri nri ọhụrụ
N'ịhazi ka ọ bụrụ ebe iri nri n'onwe ya, Hilton Singapore Orchard na-ebuli ebe nri obodo ahụ nwere echiche iri nri ise echekwabara gụnyere Chatterbox na-emeri ihe nrite, Shisen Hanten nwere Michelin abụọ na nri na ihe ọṅụṅụ ọhụrụ atọ na-egosipụta nri ụbọchị niile. , ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọpụrụiche na ebe ezumike na ụlọ mmanya.
Nzụkọ na mmemme
Site na oghere mmemme 16 arụzigharịrị nke ukwuu na nke dị iche iche na-agafe ihe karịrị square mita 2,400, ụlọ nkwari akụ ahụ ga-enwe ike ịnabata nzukọ na mmemme sitere na mgbakọ na ihe ngosi ruo agbamakwụkwọ na mmemme ọha. N'inye otu n'ime oghere mmemme kachasị ukwuu n'obodo ahụ, Hilton Singapore Orchard ga-egosipụta ụlọ ịgba egwu abụọ a haziri ahazi na enweghị ogidi dabara na mgbidi LED ọgbara ọhụrụ, ọkụ na teknụzụ ụda nke nwere ike ịnabata ndị ọbịa 1,000 na raara onwe ha nye tupu. mpaghara ọrụ. Maka obere nzukọ, ndị na-eme atụmatụ nwere ike ịhọrọ n'ime ụlọ ọrụ 12, ọtụtụ n'ime ha na-anabata ìhè ehihie, yana oghere ndị na-akpali akpali na gburugburu ụlọ nkwari akụ maka ezumike kọfị nkeonwe na oge nkwụsịtụ.
Cedric Nubul, onye isi njikwa, Hilton Singapore Orchard kwuru, "Hilton Singapore Orchard ga-abụ otu n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị a na-atụ anya imeghe na 2022 na mgbakwunye na-akpali akpali na ọnọdụ dị egwu na Orchard Road. Site na nhọrọ ebe obibi 1,080 a họpụtara nke ọma, otu n'ime oghere mmemme kachasị ukwuu na mpaghara ahụ, echiche iri nri ise na ebe etiti dị n'etiti ebe a na-ere ahịa na ebe iri nri nke Singapore, ụlọ oriri na ọṅụṅụ atọrọ ka ọ bụrụ ebe nhọrọ maka azụmahịa na ndị njem ntụrụndụ, yana ndị bi ebe a.”